Waxaa Qoray Maxamuud Jamuuni / Waxaa La Daabacay Sunday, 12 Nov 2017 12:00 PM / No Comments
Mid kamid ah macalimiinta ugu guulaha badan kubadda cagta xilligaan waxaa la aminsan yahay inay yihiin Guaridola iyo Jose Mourinho kuwaas oo dagaalkooda ugu kululaa uusoo bilowday Classico maadaama ay kala hogaaminayeeen Real Madrid iyo kooxda Barcelona.
Hadaba labadaan ruux waxaa la aminsan yahay inay labada shaqsi ee ugu dagaalka badan kubadda cagta sidoo kale mid walba midka kale waa uu necebyhay wax kalena ma ahanee xifaaltanka ayaa sidaas ka dhigay.
Lix sano iyo bar ayaa labadaan ruux waxaa dhexmaraya dagaal xoogan oo dhanka kubadda cagta ah ,waxaana dagaalkaas ay ku adkeynayaan awoodooda kubadda cagta iyo heerka ay u gaarsiisan yihiin xifaaltan ahaan.
Macalin Jose Mourinho waa macalin mar walba kooxdiisa caawiya oo jecel inuu ku guuleeysto koobab ,waxaa uu aad u neceb yahay xifaaltanka iyo sidoo kale dagaalka kala dhexeeya ciyaartooyda kale.
Macalin Jose Mourinho ayaa xifaaltanka ugu adag la galay Guardiola isagoo ku sugan kooxda Inter Milan kadib markii uu ka reebay tartanka Champions League 2010,waxaa uu sidoo kale xifaaltanka soo gaaray Classico gaar ahaan horyaalka Spain ee La Liga.
Sida muuqatay Jose Mourinho ayaa la dagaalamay kooxda Barcelona waxaa uu marar badan oo kooxdaan ka horyimid ku guuldareysaneyey inuu si fiican kaga dhexmuuqda Spain , balse waxaa dhacday inuu horyaal ku guuleystay inta uu joogay Spain.
Xifaaltanka labadaan ruux waxaa uu soo gaaray hada horyaalka England Primer League ,waxaana ay kala wataan dhibcooyin maadaama is aragooda koowaad ee horaalka primer League uu ahaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Macalin Jose Mourinho ayaa la garaacay kulnkii ugu horeeyey ee Guardiola uu kala kulmay Primer League,waxaase la arkay in Mourinho uu bareejo goolal la’aan ah ku qabtay Manchester City kulankii 2aad ee horyaalka.
Hadaba xili ciyaareedkaan Macalin Guardiola ayaa 8 dhibcood ka sareeya Jose Mourinho , waxaana kooxda Macalin Jose Mourinho ay lumisay shan dhibcood seddex kulan oo ay la dheeshay kooxaha kala ah Liverpool & Chelsea.
Waxaase Macquul ah inuu sii fogaado horyaalka Primer League waa haddii Manchester Derby natiijadiisa dhanka Manchester City ay aado.